Guddiga bixiya abaalmarinta nabadda ee Nobel oo digniin u soo diray Abiy Ahmed | Xaysimo
Home War Guddiga bixiya abaalmarinta nabadda ee Nobel oo digniin u soo diray Abiy...
Guddiga bixiya abaalmarinta nabadda ee Nobel oo digniin u soo diray Abiy Ahmed
Guddiga billada Nobel-ka ee Norway ayaa ku biiray codadka caalamiga ah ee ugu baaqaya ra’iisul wasaaraha Itoobiya inuu soo afjaro dagaalka sokeeye ee 14-ka bilood ka socday dalkaas.
Bayaan ay soo saareen ayaa lagu sheegay in Abiy Axmed – oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel 2019 – ay mas’uuliyad gaar ah ka saaran tahay sidii loo soo afjari lahaa dhiigga daadanaya.
Ra’isal wasaaruhu mar uu ka hor hadlayey baarlamaanka wuxuu sheegay dagaalka Tigraay ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo TPLF ka sokoow muddo laba sana ah iney gudaha dalka Itoobiya ay ka dhaceen 113 dagaal. Dagaalladaasi oo uu sheegay inay ka dhasheen qasaaro naf iyo maalba leh.
Qoraalka sawirka,Rai’sal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed